10 Tiknoolojiyada Teknolojiyada ee aadan ka ogeyn | Martech Zone
Isniin, Janaayo 25, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tikniyoolajiyadda Teknolojiyada ayaa muhiim u ah Martech Zone. Markaan wax ka qoro sida tikniyoolajiyad gaar ahi u saamaynayso suuq-geynta, waxaa inta badan dhiirrigeliya barta tiknoolajiyadda. Caadi ahaan waxay qabtaan shaqo weyn oo ku saabsan daboolida wararka iyo fikradaha ku saabsan tikniyoolajiyadda, laakiin waxay seegaan codsiyada suuqgeynta wax ku oolka ah.
Wiilasha waaweyni waxay had iyo jeer isku dayayaan inay helaan wararka ugu weyn, xanta ugu dambeysay, ama isku dayaya inay tuuraan cinwaan weyn oo qof walba soo jiitay. Wax badan ayaa ka socda Teknolojiyada oo ay tahay inaad ka ogaato, in kastoo. Dadkani marwalba dusheeda ayey saaran yihiin!
Halkan waxaa ah 10 Blogs Teknolojiyadeed oo aadan ka aqoon:
Maxaa Noo - Patric waa saaxiib wanaagsan shirkadiisuna waxay baraysaa 'farsamada aan ahayn'.
Codsi Naxdin - Jeff wuxuu leeyahay talooyin aan qiimo lahayn oo qoraalladiisu had iyo jeer tahay kaftan.
Ken McGuire - Ken wuxuu daboolayaa sida tikniyoolajiyaddu u beddeleyso nolol maalmeedkeenna.
Laakiin Waxaad Tahay Gabar - waxaa jira cod madhan oo codadka dhedigga ah oo ku yaal aagga Tech-ka. Adria ayaa buuxinaysa.
BilowgaTech - Boggan wuxuu ka dhigayaa tiknoolajiyadda mid si fudud loo akhriyi karo.
Tikniyoolajiyadda & Suuqgeynta Blog - Eric wuxuu daboolaa dhammaan kiisaska maxkamadda ee saameeya tikniyoolajiyadda iyo suuqleyda si isku mid ah.
Chip's Quips - Saaxiib waqti dheer ah Martech Zone, Chip wuxuu had iyo jeer soo qaataa qaar ka mid ah wararka ugu fiican shabaqa.
2 Weedho ama Kayar - Xitaa ka gaaban qoraallada Chip, saaxiib Bill Dawson ayaa ka sii horreeya teknolojiyadda wuxuuna siiyaa xoogaa sharraxaad ah
Looska Faa’iidada - saaxiib kale oo ka mid ah baloogga, Thor Schrock wuxuu isku daraa tiknoolajiyada iyo faa'iidada boggiisa.
Blog Blog kasta oo Teknolojiyadeed - saaxiibka wanaagsan Jason Bean waa mid joogto ah oo kujira blog kasta oo Joe ah.
Mararka qaarkood baloogyada ma leh muuqaalkaas iyo dareemayaashaas hufan - laakiin waxa ku jira had iyo jeer waa halkaa! Kudar baloogyadan akhristahaaga quudinta waxaanan ku kalsoonahay inaadan niyad jabi doonin.
Tags: haynta macaamiishaxogta bulshada
ChaCha ma ka caqli badan yahay Google?
Jan 29, 2010 saacadu markay ahayd 7:24 PM
Wow, mahadsanid, Doug! Sharaf ayay ii tahay in lagu daro liistada noocan oo kale ah - gaar ahaan kuwa la midka ah Jeff Atwood.